मुलुकको गन्तव्य ग्रिस की चिली ? – Online Nuwakot
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ मुलुकको गन्तव्य ग्रिस की चिली ?
अनलाइन नुवाकोट माघ १२ २०७४, शुक्रबार ०७:३४
अर्कोतिर केही वर्षअघि विश्व बजारमा तामाको भाउ एकाएक बढेका बेला चिलीले उत्खनन गर्दै यसको निर्यातबाट अर्बौं डलर कमायो । चिलीले तामा निर्यातबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी० को ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सञ्चितिमा राख्यो । सरकारी कर्मचारी, ट्रेड युनियनलगायत सर्वसाधारणले यो रकम विभिन्न नाममा वितरण गर्नुपर्ने माग राखे । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले यसलाई अस्वीकार गर्दा उनलाई छुचो, लोभीलगायतको उपमा दिइयो । यो घटनाको केही वर्षपछि विश्वभर आर्थिक मन्दी आयो । चिलीका छिमेकी मुलुकले अर्थतन्त्र जोगाउन ठूला राष्ट्र र दातृ निकायसमक्ष गुहार मागे । चिलीले भने त्यही तामा निर्यातबाट आएर सञ्चिति भएको रकम झिकेर खर्च गर्‍यो । आर्थिक मन्दीले उसलाई बढी प्रभावित गर्न सकेन । पहिले अनेकौं उपनाम दिएर गाली गर्नेले अर्थमन्त्रीको तारिफ र अभिनन्दन गरे।